Maxay tahay abaal-marinta uu maanta ku guuleystay Eden Hazard? – Gool FM
(London) 27 Maajo 2019. Ururuka taageerayaash kubadda cagta Ingiriiska ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in xiddiga kooxda Chelsea ee Eden Hazard uu ku guuleystay xiddiga sanadka ee Premier League, kaddib markii ay sidaas u codeeyeen taageerayaasha kooxaha kala duwan ee England.
Eden Hazard ayaa abaal marintan ku garaacay xiddigaha kala ah van Dijk, Sadio Mané, Sergio Aguero, Raheem Sterling iyo Bernardo Silva.
Laacibka reer Belgium ayaa xilli ciyaareed fiican ku qaatay kooxdiisa Chelsea horyaalka Premier League, wuxuuna Blues ku hogaamiyay inay dhanka kala sareynta kaga dhameystaan booska 3-aad, isla markaana si toos ah ay ugu soo baxaan tartanka Champions League.
Eden Hazard ayaa ka qeyb qaatay xili ciyaareedkan 31 gool ay dhalisay kooxda Chelsea, kaddib markii uu dhaliyay 16 gool, halka sidoo kale uu caawiyay15 gool kale.
Si kastaba Eden Hazard ayaa lagu soo waramayaa inuu ku sii dhawaanayo ka tagista kooda Chelsea, kaddib marka uu furmo suuqa kala iibsiga ee xagaaga, waxaana lala xiriirinayaa inuu xiran doono maaliyada Real Madrid.